नागरिकताको निर्णयः के भन्छन् एनआरएनहरु ? - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
नागरिकताको निर्णयः के भन्छन् एनआरएनहरु ?
एनआरएनए , मध्यपूर्व संयोजक
गैर आवासीय नेपाली संघले उठाउँदै आएको नागरिकताको माग “नागरिकताको निरन्तरता” हो । तर पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि समस्या लगायत कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संबिधानसभाले सार्क मुलुक बाहेकका नेपाली मुलका बिदेशी नागरिकहरुलाई राजनीतिक र संबैधानिक अधिकार बाहेकको “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्रस्ताव पास गरेको छ, यो सबै गैर आवासीय नेपालीहरुको लागि खुशीको कुरा हो । एउटा नेपाली सदैव नेपाली हुने अवसर दिएको छ, सबै नेपालीहरुका लागि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले विश्वका जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीले नेपालसँग जोडीई राख्ने एउटा सेतुको काम गर्ने छ र उनीहरुमा नेपाल प्रतिको अगाध माया रहिरहने छ । साथै एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई बिदेशीको नजरले हेर्नु पर्ने अबस्थाको अन्त्य हुने छ ।
धरम केसी, साउदी अरव
एनआरएनएका लागि नागरिकताको एजेण्डाले सफल अवतरण गरेको छ । यो सफलताका लागि स्वदेशमा र बिदेशमा रहेका अधिकांश नेपाली (नागरिक)हरूको सद्भाव र समर्थन रह्यो । नेपाली नागरिकता बाहक तमाम एनआरएनहरूले पनि यो मागमा साथ दिंदै ऐक्यबद्धता प्रकट गरेकै हुन । अब नागरिकता माग्दै आएका एनआरएनहरूको कर्तब्य र दायित्व बढेको छ । उनीहरूलाई देशले त दियो तर अब उनीहरूले देशलाई चैं के दिन्छन त ? भनि नियालिने छ । ठिक त्यसरी नै नागरिकताकै कारण ओझेलमा पर्दै आएका बिशेषतः खाडी तथा मलेशियाका श्रमजिवी एनआरएनएहरूको एजेण्डा अब चैं उच्च प्राथमिकतामा पर्छ या पर्दैन भन्ने पनि नियालिने छ । यस क्षेत्रका एनआरएनहरू बितेको १०, १२ बर्षमा नागरिकता माग्ने एनआरएनहरूका पुच्छर जस्तै भएकै हुन । साँच्चै भन्नु पर्दा अझैपनि खाडी वा मलेशिया वा अफ्रिका नै एनआरएनएको नेतृत्व नै सम्हाल्ने अवस्थामा पुगेका छैनन । नेतृत्व अझै केही बर्ष नागरिकता माग्ने मुलुकहरूमै रहिरहने छ तर अबका दिनमा नेतृत्व जहाँ रहेपनि मूल नीति चाहिं खाडीको बन्न सकेन भने त्यो ठूलो धोका र बेइमानी हुनेछ र खाडीका नेपाली श्रमिकहरूले त्यो उपेक्षा र अपमान सहिरहने छैनन ।
संबिधानसभाले विभिन्न मुलुकमा रहेका गैर आवासीय नेपालीले पनि नेपाली नागरिकता पाउने निर्णय पारित गरेपछि हामी अत्यन्त खुशी भएका छौं । संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपालीले पनि राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार नपाउने गरी नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । धारा १४ मा उल्लेख छ– विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपालको गैरआवाशीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ। मलाई लाग्छ, नगरिकिता सम्बन्धका गैर आवासिय नेपाली संघका धेरै माग यसले सम्बोधन गरेको छ । यसको स्वागत गर्दछौं ।
पूर्व अध्यक्ष एनआरएनए, एनसीसी ओमान
एनआरएनहरुलाई नागरिकताको प्रावधान राखिनुलाई स्वागत गर्नु पर्दछ । आज एनआरएन भएका हरु आखिर नेपाली आमाका सन्तान हुन् । उनीहरुका बच्चाहरु हाम्रा सन्तति हुन् । अब देश ले बाटो खोलिदिएको छ । देशले आफ्नो धर्म पुरा गरेको छ । अब एनआरएनको आफुले देश प्रति देखाउने धर्मको पनि मुल्याङ्कन हुनेछ. । अब सीप, साधन र स्रोत सबैले नेपाल बनाउन लागौं ।
मागेको जति कहिल्यै पाईंदैन । दिएकोले कहिले पुग्दैन । यो मानविय स्वभाव नै हो । यसलाई उपलब्धि सोचेर अघि बढौ ।